टेस्लाका मालिकले एकै दिनमा कसरी गुमाए ८० अर्ब रुपैयाँ ? – Lokpati.com
नेपाली काँग्रेस अमेरिका नेकपा प्रचण्ड सरकार नेपाल प्रहरी राशिफल केपी शर्मा ओली मृत्यु चितवन प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पक्राउ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड अपराध
टेस्लाका मालिकले एकै दिनमा कसरी गुमाए ८० अर्ब रुपैयाँ ?
By लाेकपाटी न्यूज On १० मंसिर २०७६, मंगलवार १३:०७
एजेन्सी। अमेरिकी कम्पनी टेस्लाका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत एलोन मस्कले हालै साइबर ट्रक सार्वजनिक गरे।अटोमोबाइल्स तथा ऊर्जासम्बन्धी अमेरिकी कम्पनी टेस्लाका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत एलोन मस्कलले निकै तामझामका साथ सार्वजनिक गरेका थिए।
उक्त साइबर ट्रकले अनेकथरी प्रतिक्रिया सिर्जना गर्‍यो। तर साइबर ट्रकका कारण मस्कले एकै दिनमा ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गुमाउनु परेको छ। साइबर ट्रक सार्वजनिक गरेकै दिनमा टेस्ला कम्पनीको शेयर मूल्यमा ६ प्रतिशतको गिरावट आयो।
कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा एलोन मस्कले एकै दिनमा ७६ करोड ८० लाख डलर गुमाएका छन्। जसका कारण उनको कुल सम्पत्ति २३ अर्ब ६० करोडमा झरेको छ। यद्यपि, उनी अझै पनि विश्वका ४१ औं धनी व्यक्तिको रूपमा कायमै छन्।
मस्कले हालै ट्विटरमार्फत् एक खुलासा गर्दै २ लाख थान साइबर ट्रकको अर्डर गरि सकिएको बताएका थिए। कुनै विज्ञापन तथा खर्चिलो घोषणाबिनै यसो गरिएको उनको भनाइ थियो । टेस्लाको साइबर ट्रक २३१.७ इञ्च लामो र ७९.८ इञ्च चौडा र ७५ इञ्च अग्लो हुनेछ।
जसमा ६ जनासम्म मान्छेहरू बस्ने ठाउँ हुनेछ। साइबर ट्रक पूर्णतः विद्युतीय गाडी हुनेछ। जीवांश इन्धनबाट चल्ने विद्यमान ट्रकहरूको विकल्पमा वातावरणमैत्री ट्रक प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य साइबर ट्रकको रहेको छ।
गढीमाई मेलामा १० दिन बन्द
एनसेलको अर्को चमत्कार